Su'aal: Muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa?
Author Topic: Su'aal: Muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa? (Read 8025 times)
« on: April 16, 2012, 10:34:40 AM »
Asalamu calaykum, salan kadib, waxan u mahad celinaya maamulka web umada muhiimad weyn u haya.
Waxan rabaa su'aal caafimad in layga cawiyo, jawabtana box laygu soo diro.
Waxan ahay wiil 27 jir, misankaygu wa 83kg, mudo 2 bil laga joogo ayan isku arkay marka aan kulayl dareemo an dhidido bisiqleyda & hareereheeda hoose ila dabada in ur aan la jeclaysan ay ka soo baxdo, timo ayan ku leyahay xabadka ila lugaha hoostoda, marka aan arko arintan xiligi hore waan xiiri jiray, wayna jogsan jirtay urtaasi, 2 bil wixi ka dambeeyay hadi an xiiro & hadi kale wa isku mid, waxan isticmaalay hair remover cream, tinti waa jarmatay walina urki wa sidii, walibana mel sakinti xirida ay iga jeexday oo bogsatay calamadiise ay ku dambayso hair remover dhig ayu ka kenay, qalajiye ayan isticmalay, way bogsatay, dhibkas urka deodrant ayan ku bufiyay bisiqleyda & hareraheda, urki wa kasi daray, saabuun ayan markan daremaba shan jeer ku dhaqay, qubayso waa sideedi, waxayna igu daran tahay urku xilliga aan fadhiyo, waxa kasi daran tusale kursiga inta dabada ee aan ku fadhiyo way igubanaysaa, hada hadan fariisto 3daqiqo kadib way i danqanaysa sidi mator shey lagu korsaray oo kulaykiisu ku baxayo inta aan uga fadhiyo, hadan istago urka iga soo baxaya dadku waa yaabayan, lakin salki igubanayay wan ka raysanayaa, dhinac u faristay waa sidi ur & salka ama dhinaca aan u fadhiyo oo igubanaya, marka fadhi la'an suragal maaha, urka & salka an ku fadhiyo oo i xanuunayana ma ficna, meel aan la xiriiro oo way daaweynayan an is leeyahayna ma garanayo, kursiga ku fariisigiisa & fadhi kaleba ka caagay, waxan is iri kulaylka & hurdo yarida ayaa sababeysa oo Librium 10mg tablet (chloramphenermine) ayan cunay oo aan ula jeedo problem-ka, fikirka badan is ilowsi naftu ha degto, waa sidii, Warkii wan badiyay.
Hadaba wixi Alle idin baray hadad arintan wax ka garaneysan iiga sheega, hadi kale bal hadi ay jiran meelo ama dad kale oo wax uun kagaranaya iigu taga. mahadsanidin.
Re: muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa.
« Reply #1 on: April 17, 2012, 12:37:18 AM »
Dhibaatadaan oo kale Waxyaalaha keena waxaa la sheegaa in ay ka mid yihiin; Bakteeriyo, isticmaalka cuntooyinka qaar, sida toon, hilibka guduudan, cuntooyin baddeeda iyo dharka lagu kululaado ee ad adag. Dad badan oo aan aqaano, waxa ay ii sheegeen; in ay ku qubeysan jireen biyo diiran oo cusbo yar lagu daray, qaar kale waxa ay ii sheegeen in ay isticmaali jireen saabuun anti bakteeriya ah, bolbale carfisooyin loo qoray iyo dhar fudud oo neylon ah. Waxa jira oo hab qalliin ah oo lagu sameeyo neerfaha nooca qaabilsan dhididka, dadkaas aan aqaan badankood hadda wey ka ladnaadeen wayna dadaaleen. Talada dhakhtarka bal aan isla aragno. Mahadsanid.
« Reply #2 on: April 17, 2012, 04:13:02 PM »
Sxb Cilmi wad mahadsan tahay talada wanagsan ee aad soo gudbisay, hadi an jawab ka bixiyo:
1. Gooryano ayan qaba i dawaqiya, waxan marmar u isticmaalaa marka ay i qabtan in an hal xabo toon ah liqo, marka ay fuqi waayan hal xabo kale ayan liqaa sidas ayan wada inta uu iga fuqayo, marka toon sidas ayan u cuna.
2. Hilibka xolaha ayan cuna, lakin cunto bad ma cuno.
3. Bolbare hal mar ayan isticmalay, wana kasii daray. Carfiso wan isticmalay DEODRANT dhowr jeer wana kasii daray.
4. Wax aanan tijabin waxa jira Biyaha kulul ee cusbadu ku jirto ee lagu qubaysanayo & Saabuunta anti bacteriyada ah, waxanan u fahmay Saabuunta Lifebouy.
Waxa ficnan lahayd dadka ka raystay ee aad shegtay in la waydiyo dhakhatirta ay la xiriireen ma kuwa maqarkaa... Mise... In ay noo sheegan si an ugu tagno.
Waanad ku mahadsan tahay.
Re: Su'aal: Muxuu yahay garan waayaye? xageense ugu hagaagaa Daawadiisa?
« Reply #3 on: April 17, 2012, 09:28:11 PM »
Walaal, Dhakhtarka waxaa weeye Doctor Dermatology ah ama Dermatologist, saabuunta antbacteriyada iyo daawooyinka la midka ah, waxaad kala tashan kartaa dhakhtarkaaga, waxaana dhici karta in laguu qoro erythmycin, laakiin mar walba waxaa muhiim ah in aad dhakhtar la kulantid si uu u baadho sababta rasmiga ah ee keenaya kuleylka & urta isla socda, waxaana jira glands laba nooc ah oo waxyaabahaan la xidhiidha; waxay kala yihiin; eccrine glands & apocrine, si kasta ha ahaatee jawaab xanuunadaan waxaad ka war sugtaa dhakhtarka webka somalidoc, Alle ha fududeeyo daawadaada.
« Reply #4 on: April 23, 2012, 12:20:29 AM »
Asalamu calaykum, salan kadib,
walaalayaal Dhaqaatiirta webkow waa la gaaray xiligii jawaabta aad bixin laheyden ee waqtigiina & aqoontinaba wax naga siiya idinkoo mahadsan.
« Reply #5 on: May 20, 2012, 01:19:14 PM »
Waxay iila muuqataa in aad qabtid cillad neefshiid xumo, ama bakteeriyada ay calooshaada safiican ugu taranto ama waxa loo yaqaano (bakterial overgrowth), waxaa calaamadaha ka mid ah: urka aad ka cabanayso, marmarka qaar neef ur badan ayaa la socoto.
Gooryaanka aad sheegayso oo tuunta u qaadanayso waxaa laga yaabaa in cillad dheefshiid in ay tahay ooba gooryaan uusan ahayn, waa haddii aad isku aragtay, dibiro ama daaco, caloosha oo wax in ay ku dhex socdaan aad moodo, saxaradaada oo saliid in la mariyay oo kale ah (saxaro dufan leh).
Hadiii calaamadaha kuwa aan sheegayo ay yihiin, cilladaada maahan mid ku tagayso qubeys, iscarfis ama tin la iska xiiro waxaad u baahan tahay in aad la xiriirto takhtar ku taqasusay dheefshiidka (gastroenterologist) si uu kuu caawiyo.
Haddii wax kale aad ka shagisan tahay u tag, takhtar guud, si laguu baaro.
Views: 19291 June 13, 2015, 03:26:34 PM
Views: 280930 December 05, 2018, 08:41:26 PM
Views: 65486 August 12, 2015, 01:45:58 PM
Views: 46417 December 21, 2009, 07:54:40 PM
Views: 4370 August 15, 2015, 12:52:33 PM